प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काबीच आज भेटवार्ता - bampijhyala.com
Home > खेलकुद > प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काबीच आज भेटवार्ता
३० श्रावण २०७८, शनिबार १६:११ bampijhyala
३० साउन, बाँपीझ्याला, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काबीच आज भेटवार्ता भएको छ । पारसले यही १९ साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले टेलिफोनमा सम्वाद गर्नुका साथै भेटको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअनुसार नै शनिबार भेटवार्ता भएको पूर्व कप्तान खड्काले जानकारी दिए ।
बालुवाटारमा भएको भेटमा देउवाले फोन सम्वादकै प्रश्न दोहोर्‍याए, ‘क्रिकेट किन छाड्नु भयो ?
आफूले राष्ट्रिय टिमबाट देशका लागि गर्नसक्ने जत्ति गरिसकेकाले सन्यास लिने निर्णयमा पुगेको उनले बताए । साथै अहिलेको निर्णय व्यक्तिगत निर्णय भएको खड्काले बताए । प्रधानमन्त्री देउवो अर्को प्रश्न सोधे, ‘अब के गर्नु हुन्छ ? पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलबाट सन्यास लिएपनि क्रिकेटबाट टाढा नहुने बताएका छन् । ‘क्रिकेट व्यवस्थापनमा रुची छ, तर एउटा व्यक्तिले मात्र केही गर्न सक्दैन’ पारस भन्छन्, ‘हामी सबै मिलेर अझ राम्रो बनाउन जरुरी छ ।
सरकारको साथ र सहगोग सधैं रहनेछ साथै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो तर्फबाट पनी सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
पूर्व कप्तान पारससँग भएको भेटवार्ताको तस्वीर ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली क्रिकेटले पाएको सफलताका लागि पारसलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले अघि लेखेका छन्, ‘नेपाल र नेपालीको शिर उँचो बनाउन जिन्दगीको दोस्रो इनिङ्समा पनि सफलता मिलोस् ।
१३ पटक सम्म फिल्मफेयर अवार्डमा नोमिनेशन भएका सडकमा कलम बेच्ने जोनि लिभर कसरी प्रवेश पाए बलिउडमा …
ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्रा अवधिभर काठमाडौँका भित्री क्षेत्रमा सवारी निषेध ३० श्रावण २०७८, शनिबार १६:११
निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा ३० श्रावण २०७८, शनिबार १६:११
सम्पादकियः विशेष आज असोज १, बाँपिझ्याला अनलाईन पत्रिका संचालनको एक बर्ष ३० श्रावण २०७८, शनिबार १६:११
पानी गौँथलीको ठूलो बथान भेटियो ३० श्रावण २०७८, शनिबार १६:११
सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय दाक्षि दँ ३० श्रावण २०७८, शनिबार १६:११